भारतकाे एकपक्षीय निर्णय अमान्य - नेपालबहस
भारतकाे एकपक्षीय निर्णय अमान्य
२१ कार्तिक, काठमाडौं । राजधानीबाट बिहीबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साबारे प्रमुख समाचार छापेका छन् । यसका साथै यसै बिषयको समाचारलाई पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक – फरक शिर्षकमा प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
बुधबार नेपालबहस डटकममा पनि नयाँ नक्साबारे परराष्ट्रको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर कसको हो सरकार ? अंग्रेजीमा विज्ञप्ती निकाल्न डरायो सरकार ? ‘गो ब्याक इन्डिया ! कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो’ लगायतका शिर्षकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशित भयो ।
यता काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने नागरिक दैनिकमा सरकारले कालापानी नेपालको भू–भाग भएको भन्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा मान्य नहुने समाचार प्रमुख समाचार बनाएको छ ।
Previous articleसोमालियामा भिषण बाढी, १७ को मृत्यु, तीन लाख ७० हजार विस्थापित
Next articleनेपालमा केही दिन बर्षासंगै हिमपात हुने अनुमान